မင်္ဂလာပါ မိတ်ဆွေ အပေါင်းတို့ မလေးရှာရောက် ရွှေမြန်မာများဖွဲစည်းတည်ထောင်ထားတဲ့ဘလော့မှ ကြိုဆိုပါတယ်.
13:20 မိုးညိုသား No comments
21:03 မိုးညိုသား No comments
11:19 မိုးညိုသား No comments
12:31 မိုးညိုသား No comments
Folder Lock 7.0.6 လိုချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပါ
19:49 မိုးညိုသား No comments
23 Aug 12, 01:43 AM
ကျော်မင်းဦး: မင်္ဂလာပါ အကို ကျနော် foder တွေကိုလော့ချတဲ ဆော့ဝဲလေးလိုချင်ပါတယ် တချက်လောက်တင်ပေးပါလား ကျေဇူးပြုီ့ပေါ့
Folder Lock ချတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလေးကို တောင်းထားတဲ့သူရှိလို့ အရင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ တခြားတောင်းထားတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲများကိုလည်း စမ်းသုံးကြည့်ပြီး အဆင်ပြေရင် တင်ပေးပါအုန်းမယ်..။ ဒီကောင်လေးကို ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာ အောက်မှာပုံလေးတွေနဲ့ ရှင်းပြထားပါတယ်.. မသုံးတတ်တဲ့ သူများအတွက်ပါ.. သူ့အတွက် Key လေးပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်..။ လိုအပ်တဲ့သူများတော့ အောက်ကလင့်တွေ ကနေဒေါင်းယူလိုက်ပါဗျာ..။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 7.7 MB ရှိပါတယ်..။
ဒီကောင်လေးကို Install ဆွဲထည့်ပြီးရင်တော့ အောက်ကပုံအတိုင်း သူ့ထဲမှာပါလာတဲ့ သူ့ရဲ့ကီးလေးကို ထည့်ပေးလိုက်ရင် ဖူးသုံးလို့ ရသွားပါပြီ..
key ထည့်ပြီးလို့ ဖူးဖြစ်သွားရင် အောက်ကပုံအတိုင်း မိမိတို့ အမြဲအသုံးပြုမယ့် Password ကို ၂ခါမှန်အောင် ထည့်ပေးလိုက်ပါ.. ဒီကောင်လေးကို ဖွင့်သုံးတိုင်း၊သုံးတိုင်း ဒီ Password ကိုထည့်ပေးရမှာပါ..။ ဒါကြောင့် ဒီ Password ကိုမှတ်မိအောင် လေ့ကျင့်ထားပါ...
အောက်ကပုံမှာတော့ မိမိတို့ Lock ချထားချင်တဲ့ ဖိုင်ကို ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်း လိုက်လုပ်ပေးလိုက်ပါ..။ အဆင့်ဆင့်သွားပြီး Ok ပေးလိုက်ရင် ဖိုဒါလေးကို လော့ချထားပြီးသား ဖြစ်သွားပါပြီ.. လော့ချထားတဲ့ ဖိုဒါလေးကိုလည်း သူ့နေရာမှာ သွားပြန်ကြည့်လိုက်ရင် ပျောက်နေမှာပါ..။ လော့ပြန်ဖွင့်လိုက်မှ ပြန်ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်..။ ဒါကြောင့် Password မှတ်မိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်..။
အပေါ်ပုံမှာ ဖိုဒါသုံးခုကို လော့ချပြထားပါတယ်..။ အသေးစိတ် လေ့လာအသုံးပြုချင်တဲ့ သူများအတွက် အောက်ကပုံလေးအတိုင်း User Guide ကိုဖွင့်ပြီး အသုံးချလို့ ရပါသေးတယ်..။ လေ့လာကြည့်လိုက်ပါဗျာ..။
အပေါ်ပုံမှာ ဖိုဒါသုံးခု လော့ချပြီး ဒီကောင်လေးကို ညာဘက် အပေါ်ဒေါင့်က ကြတ်ခြေခတ်နဲ့ ပိတ်လိုက်ပါတယ်..။ ပြန်ဖွင့်တဲ့ အခါမှာ အောက်ကပုံအတိုင်း Password ရိုက်ထည့်ပြီးမှ ဝင်လို့ရပါတယ်.. Password မှန်အောင်ရိုက်ထည့်ပါ..။ OK ပေးလိုက်ပါ..။
Password မှန်ရင် ဒီကောင်လေး ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်..။ အထဲမှာ ကျနော်လော့ချထားတဲ့ ဖိုဒါသုံးခု ရှိနေပါတယ်...။ အဲဒီဖိုဒါလေးတွေ ရှိတဲ့နေရာမှာ သွားပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ ဖိုဒါတွေ ပျောက်နေတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်..။ ဒီအောက်ကပုံမှာ ၂ခုယှဉ်ပြထားပါတယ်.. ကြည့်ရလွယ်အောင်လို့ပါ..။
ဖိုဒါတခုကို အရင်လော့ပြန်ဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်..။ သူ့နေရာလေးထဲမှာလည်း အဲဒီဖိုဒါလေး ပြန်ပေါ်လာတာကို အောက်ကပုံအတိုင်း မြင်ရပါပြီ..။ မိမိတို့ လော့ပြန်ဖွင့်ချင်တဲ့ ဖိုဒါကို အရင်တချက်ကလစ်ပြီးမှ Select ဖြစ်မှ Unlock နေရာကို ကလစ်ပါ..။ ဒါဆိုရင် လော့ချထားတဲ့ ဖိုဒါလေး ပြန်ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်..။
တကယ်လို့ ဒီထဲမှာရောက်နေတဲ့ ဖိုဒါတွေကို ပြန်ထုတ်ပစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ဆုံးပုံလေးအတိုင်း အဆင့်ဆင့်လုပ်ပေးလိုက်ပါ.. ဒါဆိုရင် အားလုံး OK ပါပြီ..
19:29 မိုးညိုသား No comments
10:41 မိုးညိုသား No comments
HipHop ejay6လေးပါ
11:38 မိုးညိုသား No comments
မင်္ဂလာပါဗျာ ဒီတစ်ခါတင်ပေးမယ့် ဆော့ဝဲလ်ကတော့ Hip Hop ejay6 ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ် အထဲမှာ crack ဖိုင်လေးလည်း ပါပါတယ်ဗျာ လိုအပ်တဲ့သူများ တောင်းယူလိုက်ပါခင်ဗျာ ဟဲဟဲ အခုတစ်လော ကျွန်တော် ဂီတနဲ့
ပတ်သက်တာတွေချည်းပဲ တင်ပေးနေလို့ စိတ်မစိုးကြပါနဲ့ဗျာ ကျွန်တော်လည်း ရှာတွေ့တာလေးတွေကို မျှဝေပေးနေတာပါ... ကျွန်တော့် ဘလော့လေးကိ်ု အစဉ်အားပေးနေတဲ့ မိတ်ဆွေများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်လျှက်ပါ ခင်ဗျာ.. ♥♥
MAGIX Digital Dj2 V2.00 လေးပါ
11:05 မိုးညိုသား No comments
Dj Studio Pro 10.4.4.3 crack version လေးပါ
11:03 မိုးညိုသား No comments
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ယခုတင်ပေးမှာကတော့ Dj Studio Pro 10.4.4.3 crack version လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကလိတတ်သူများ ကလိနိုင်ပါစေဗျာ... မလုပ်တတ်သူများ သီချင်းလောက်တော့ ဖွင့်လို့ရပါတယ် ဟီးဟီး. :P
ကဲလိုအပ်တဲ့သူများ အောက်ကပုံလေးက်နေဒေါင်းယူလိုက်ပါ ခင်ဗျာ .. အဆင်မပြေတာရှိရင်လည်း ကွန်မန့် ပေးခဲ့ပါ ခင်ဗျာ.. မိတ်ဆွေများ အားလုံးကိ်ု ကျေးဇူးတင်လျှက်..
Run Box ထဲမှာ နောက်ထပ်ရိုက်လို့ရတဲ့ Command လေးတွေပါ..
02:46 မိုးညိုသား No comments
22:36 မိုးညိုသား No comments
**အရွယ်အစားတူ အာလူးစိမ်း ၃ လုံးကိုရေစင်အောင်ဆေးပါ။
...သန့်ရှင်းသောပိတ်စိမ်းပါးလေး နှင့် အရည်ညှစ်ယူပါ။ (အုန်းနို့ညှစ်သလို)
အဲဒီအရည်ကို အရသာကောင်းချင်ပါက ပျားရည်အနဲငယ်ထဲ့သောက်ပါ။
**အဲဒီအရည်ကို တခွက်ကနေ နှစ်ခွက်အထိ
အသည်းရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ အစာအိမ်ရောဂါ၊
ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊
ခါးနာ၊ ပခုံးနာ၊ ကျီးပေါင်းရောဂါ တွေပျောက်ကင်းနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
22:31 မိုးညိုသား No comments
10:51 မိုးညိုသား No comments
10:49 မိုးညိုသား No comments
10:22 မိုးညိုသား No comments
ညစ်ညမ်း ၀က်ဘ်ဆိုက်များမှလွဲ၍ ဘလော့ဂ်များ အပါအ၀င် ၀က်ဘ်ဆိုက်များ အားလုံးကို မြန်မာက ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီ
P h o t o ; subversion.assembla.com ညစ်ညမ်း ၀က်ဘ်ဆိုက်များမှ လွဲ၍ ဘလော့ဂ်များ အပါအ၀င် ကြည့်ရှုခွင့်ပိတ်ထားသည့် ၀က်ဘ်ဆိုက်များအာ...
Folder Lock 7.0.6 23 Aug 12, 01:43 AM ကျော်မင်းဦး: မင်္ဂလာပါ အကို ကျနော် foder တွေကိုလော့ချတဲ ဆော့ဝဲလေးလိုချင်ပါတယ် တချက်လောက်တင်ပေ...
လူတယောက်ရဲ့ မြတ်နိုးစရာအရာ တွေကို အသည်း နှလုံးနဲ့ တင်စားခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိသလို ၊ မုန်းတီး ရွံရှာဘွယ်ရာတွေကိုတော့ အော့နှလုံးနာတယ် ။ အသည်းနာတယ် ဟု ...
ယူကျုမှ သီချင်းလေးများကို တင်ဆက်ဖျော်ဖြေနေပါမယ်.. သီချင်းချစ်သူများအတွက်ိ တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ် ဆိုဒ် အပြည့်ကြည့်လိုပါက PLAY ကိုကလစ်ပါ နောက်...
Blog Archive July (1) April (3) February (6) October (5) September (1) June (4) May (23) April (19) November (3)
Get the Sky Watch widget and many other great free widgets at Widgetbox! Not seeingawidget?
မူပိုင်ခွင့် © ၂၀၁၃ ♥ | ပြုလုပ်သူ မိုးညိုသား